शब्दकोश: March 2012
खै, म चलाउँछु अब त्रिशूल
गंगा अब बगाउँछु यतै ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, March 29, 20124: Comments
शान्त समुद्र पनि छालहरुमा पौडिंदै किनारसम्म साउती मार्न आइपुग्छ, आफ्नो चाहिं एकतमासले बित्न थालेका छन् दिनहरु । अचेल आफ्नो प्रतिभा उजागर गर्नेभन्दा पनि अरुकै प्रतिभामा लुटपुटिएर मक्खिंदैछु । फिल्म हेर्ने, किताब पढ्ने, घुमफिर गर्ने ।
यसबीचमा घरैमा निकै फिल्म हेरियो । कहिले त दिनमै दुइटासम्म । अक्सर कस्तो लाग्छ भने एक दिनमा एकभन्दा बढी फिल्म हेरेमा ती फिल्मको प्रभाव आफूमा राम्ररी बस्न सक्दैन र हेरेका ती फिल्मप्रति पनि अन्याय हुन जान्छ । कतिपय त अझ एकसाथ चार-पाँचवटा किताब पढ्ने बानी भएको कुरा सुनाउँछन्, विषय-प्रसंग जुधेर ती कति हैरान हुँदा हुन् जस्तो लाग्छ । तर किताब पढ्ने कसरतभन्दा थपक्क आँखा उघारेर बसिदिए पुग्ने फिल्म हेर्नतिर लाग्दा एकपछि अर्को फिल्मको संख्या बढाउन कुनै हिसाब गरिन्न रैछ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, March 28, 2012 1 : Comments
धार्मिक हिसाबले स्वयम्भू स्तुपाको महत्व विशिष्ट छ । पर्यटकीय आकर्षणमा पनि यसले चुम्बकको काम गर्दै आएको छ । धेरै फिरन्तेहरु स्वयम्भूको थुम्कोमा त्यहाँको अर्धमुदित नयनको दर्शन गरेर मन ‘पवित्र’ पार्न नभई मन ‘शीतल’ पार्न उक्लिने गर्छन् । अझ गजबको कुरो त, स्यवम्भू पुग्नुको कतिपयको उद्देश्य स्वयम्भू परिसरका सम्पदाको दर्शन नभई माहुरीको चाका जस्तै फैलिएको काठमाडौं उपत्यकाको संरचना अवलोकन गर्नु रहेको हुन्छ । आज त्यही थुम्कोतिर उक्लेर सुस्ताऔं ।
अरु तस्बिर हेर्न भित्र पसौं -
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, March 17, 2012 1 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, March 15, 2012 1 : Comments
पहिरिएर बालुवाको ओभरकोट
आएछौ नि हाम्रो बस्तीमा !
जाबो हावा भन्थ्यौ हामीलाई
हत्केलाको लगौँटी बाहेक
के हुनेछ तिमीसँग,
के हुनेछ बाबुसाहेब ?
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, March 06, 20123: Comments
पर्यटक जस्तो बादल !
कुनै नेपाली कविले उपमा दिए झैं आकाशको सीमाहीन देशमा बादलको मनमौजी वहकाव पर्यटकीय उडानभन्दा कम इर्ष्यालाग्दो हुँदैन । घरि सलाइको काँटी जस्तै छरिएर बिलाउँछ, घरि अमिवाको अवतार लिंदै झोल्लिएर तन्किन्छ ।
केही समयअघि काठमाडौंछउकै सेतो गुम्बा जाँदा बादलको त्यस्तै बथानले टाउकोभरि थिच्यो । कस्तो भने, घरैघरको सिउरले आकाश छोपिने काठमाडौंदेखि छलिएर डाँडातिर पुग्दा आकाशको बाथटबमा चोबलिएको नाङ्गो नौजवान जस्तो भएर फनफनाएको देखियो बादल । त्यही रुपाकृतिको केही झलक हेरौं :
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, March 02, 20123: Comments